Mashiinka Korantada Wajiga ah
Dhamee Nuugista Dabka Jirka Dabka
Is-priming saar durugsan
DC Burushka Aan Caadi Ahayn Soo Saar Solar
Sababta dabka ee matoor saddex waji ah
Sababaha ugu waaweyn ee sedexda waji ee asynchronous motor ka ah dabka ayaa ah xulasho aan habooneyn, adeegsi ama dayactir. Qaar ka mid ah matoorada ayaa leh tayo liidata, taas oo sidoo kale sabab u ah dabka. Qaybaha ugu weyn ee dabka ee matoorrada guud waa hareeraha, hogaaminta, xudunta birta, Burushka iyo dhalista Moot biiro, fiyuusyada iyo dist ...
Falanqeyn ku saabsan xaaladda taagan iyo Rajada Horumarinta ee warshadaha korantada Shiinaha ee 2020
Falanqeyn ku saabsan xaaladda hadda jirta iyo Rajada Horumarinta ee warshadaha korantada Shiinaha ee 2020 Gawaarida ayaa ah isha tamarta ee warshadaha. Iyadoo loo marayo isdhexgalka korantada iyo birlabta, isweydaarsiga wadajirka ah ee u dhexeeya tamarta korantada iyo tamarta tamarta waa mid dhab ah ...
Maxaa saynisyahankii ugu sareeyay Iran ee nukliyeerka loo dilay?
Israel ayaa hada ah wadan yar laakiin awood badan oo kuyaala Bariga Dhexe maxaa yeelay waxay heysataa hubka Nukliyeerka, Israel waxay mudo dheer u arkeysay Iran inay tahay qodax dhinaceeda ah iyo qatarta ugu weyn ee ay leedahay, sidaas darteed Israel ma aysan joojin carqaladeynta dadaalada Iran, gaar ahaan ka hortagga Iran inay sameysato nukliyeerka. hubka, si enr ...
Kooxda cusub ee Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxay saameyn ku yeelatay ganacsiga shisheeye ee Shiinaha
Antony Blinken, Linda Thomas-Greenfield iyo Jake Sullivan ayaa dhamaantood xubno ka ahaa Aqalka Cad ee Obama, waxaana loo arkaa inay yihiin taageerayaal daacada u ah Mr. Biden iyo shaqsiyaad dhexe oo xukuma siyaasadiisa arimaha dibada. Linda Thomas-Greenfield, waxay ka soo shaqeysay Afrika sanado badan waxayna ...
Falanqaynta Qaylada Mashiinka Korontada
Meelaha ugu waaweyn ee laga helo matoorka korantada waa buuqa elektromagnetic, buuqa farsamada iyo buuqa hawo qaadista. Noise Qaylada elektromagnetic Isdhexgalka aagga magnetka ee farqiga hawada ee matoorka wuxuu dhaliyaa xoogag shucaac leh oo beddela waqtiga iyo waqtiga, taas oo keenta in xuddunta stator iyo jirku ay ...
Rajada horumarka ee mashiinka waxtarka badan
Is-dhexgalka iyo dib-u-habeynta dhuxusha, macdanta, soo saarista qalabka iyo warshadaha kale ayaa sii horumarin doona baahida iyo horumarinta wax soo saarka matoorka ee dhexdhexaadka ah. Hirgelinta dheeriga ah ee siyaasadda qaran ee ilaalinta tamarta iyo yareynta qiiqa ayaa horay u dhigeysa mid cusub oo sare ...
Haddii mootadu daadad leedahay? Weli ma shaqeyn kartaa?
Sidaan ognahay waxaa jira noocyo badan oo matoorro koronto ah, guud ahaan matoorku ma dhaawici doono biyo, laakiin heerka dahaadhku si weyn ayuu u yaraan doonaa. Nidaamka dayactirka ee marinka biyaha guud ahaan wuxuu la mid yahay nooc kasta oo matoorrada ah Gaar ahaan, u kala bixi mootada daaweynta qalajinta. Qaado saddexda-p ...
Maxaa dhacaya marka saddex waji ay ka gaabiyo hal weji?
Hawlgalka wajiga wajiga ee mootada saddex waji ah waxaa loola jeedaa maqnaanshaha waji ku jira stator-ka oo wareejinaya koronto saddex-waji ah korantada. , matoorka guud ahaan wuxuu soo saari doonaa dhawaq "buzz" ah, iyo ...
Hordhaca ilaalinta mootada
Heerka ilaalinta ee korantada GOGOGO guud ahaan waxaa lagu muujiyaa IP-ga Nambarka koowaad waa caddeyn boodh, lambarka labaadna waa caddeyn biyo. Hadda Gogogo Saddex waji mashiin koronto, hal wajiile farsamo yaqaan koronto koronto ayaa sharaxaya heerka ilaalinta mootada IP lambar walbana wuxuu matalaa macnaha. ...
Sida loo xaliyo dhibaatada korantada koronto ee aad la kulantay
Cilladaha mootada iyo xalinta cilladaha Sababaha suurtagalka ah Hubi ama qaababka calibratiron 1. Mashiinka aan culeyska saarnayn ma bilaabi karo 1. Xarig jaban oo xarig ah (saddexda sadar ayaa ah xididka) 2.Marka ilmuhu saddex-waji fuulo ee kala-jabiyaha wejiga (Y nooca conncetion) 3.P ...
Cilladaha mootada iyo xalinta cilladaha Sababaha suurtagalka ah Hubi ama qaababka calibratiron 1. Mashiinka aan culeyska saarnayn ma bilaabi karo 1. Xarig jaban oo xarig ah (saddexda sadar ayaa ah xididka) 2.Marka ilmuhu saddex-waji fuulo ee kala-jabiyaha wejiga (Y nooca conncetion) 3.The ...
CSA waxay sifiican u ansixisay gaarsiinta qalabka wax lagu buuxiyo
Waxaan nasiib u helnay inaan la kulanno iibsade.Waxay ka timid Kanada, injineer farsamo oo ka tirsan soosaaraha maxalliga ah ee mashiinka wax dumiya Sababtoo ah qiimaha shaqada ee sarreeya, wuxuu u yimid shiinaha si uu u raadsado alaab-qeybiyeyaasha OEM. Waxaan isla xiriirin jirnay muddo dheer, waxaanan u soo qaadnay shaybaarro si waafaqsan shuruudihiisa.